के नायिका साम्राज्ञी शोषण भएकै हुन् ?(भिडियो सहित) -FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
के नायिका साम्राज्ञी शोषण भएकै हुन् ?(भिडियो सहित)
फिल्मी फण्डा । बलिउड र हलिउडमा बेलाबखत कलाकारहरुमा नयाँ अभियनाहरु बाहिर आउने गरेका छन् । हालै बलिउडमा अभिनेता शुसान्त सिंह राजपुुतले आत्महत्या गरेसँगै नातावाद र ग्रुपिजमको विरुद्धको अभियान शुरु भयो ।
त्यो अभियान एकाएक नेपाल प्रवेश भयो । नेपालमा पनि केही नायिकाहरुले नातावाद, क्रिपावाद र ग्रुपिजम हावी भएको दावी गरिरहेका छन् । यस विषयले राम्रै चर्चा पाएको छ । यहि बीचमा कलाकार पल शाहले निर्माताहरुबाट कलाकारले आफ्नो पारश्रमिक पाउन धेरै सास्ति खेप्नु परेको बताए ।
त्यसपछि यसप्रति धेरै कलाकारहरुको प्रतिक्रिया समेत आयो । लगतै निर्माताहरु समेत कलाकारको यस्तो अभिव्यक्तिको विरुद्ध खरो उत्रिए । यहि बीचमा नायिका सामाज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले आफु प्राय काम गरेका सबै निर्माताहरुबाट शोषित भएको बताएकी छिन् ।
उनले इन्स्टाग्राममा एक भिडियो पोष्ट गर्दै फिल्ममा लागेर नमिठो अनुभव भोगेको गुनासो गरेकी छन् । फिल्म क्षेत्रमा काम गर्दा आफुले कलाकाको शिसाबले कहिल्यै सम्मान नपाएको उनली बताएकी छन् ।
साम्राज्ञीले फिल्म सुटिङका बेला छायांकन स्थलमा खानका लागि पानी माग्दा समेत फिल्मका निर्माता र निर्देशकले अपशब्द बोल्ने गरेको दावी गरेकी छिन् । सुटिङको क्रममा निर्माता र निर्देशकबाट हुने गरेको व्यवहार निकै पिडादायी हुने उनले बताएकी छन् ।
यस्तै व्यवहारले आफु धेरै पटक रोएको समेत उनले दावी गरेकी छन् । आफु कामप्रति इमान्दार र लगनशिल भएकै कारण सबै पिडा सहेर काम गरिरहनुपरेको उनले बताएकी छिन् । उनले कतिपय कुरा अmभै भन नसकिएको दावी गर्दै नेपाली फिल्म क्षेत्रमा अनुशासन र सम्मान आवश्यक रहेको बताएकी छिन् ।
उनको भिडियो जस्ताको तस्तै :
A post shared by Samragyee rajya laxmi shah (@srls_samragyeerlshah) on Jun 25, 2020 at 11:29pm PDT
रेखाको लकडाउन एक्सरसाईज
गायकको बायोपिक गर्दैछन् प्रदीप
कोरोना कहर– निर्माताहरु नै लोभ लालचमा, ३३ फिल्मको ठाउँमा ७० को लिष्ट आउट
नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा फिल्म
फिल्म ‘चिनी कम रंग कडा’ अमेजन प्राइम रिलिज
संगीतकार अर्जुन र गायिका दुर्गाले गरे लकडाउनमा बिवाह
अनिताको तीज गीतमा प्रिज्मा–प्रिन्सीसँग बले (भिडियो)
सुशान्तको अन्तिम फिल्म ‘दिल बेचारा’ को ट्रेलर (भिडियो)
२०२१ मा अजय देवगनको ‘मैदान’
रविन र अश्मी फिचर्ड ‘अतालिन्छ यो मन’ (भिडियो)
मेलिनाको गीतमा देशनरेश र कल्पना (भिडियो)